लक्ष्मी र शुक्र ग्रहको पुजा यसरी गर्नुहोस्, हुनेछ तत्काल धनला भ ! – Sandesh Press
June 4, 2021 361
शुक्रवार लक्ष्मीको विशेष दिन हो । लक्ष्मी धनकी देवी हुन् । त्यसैले धन प्राप्त गर्न चाहनेले लक्ष्मीको आराधना गर्नुपर्ने धार्मीक विश्वास छ । आज शुक्रबार हिन्दूधर्मावलम्बीले सन्तोषी माता र वैभव लक्ष्मीको उपासना गर्ने धार्मीक प्रचलन छ । शुक्रबारको दिन सन्तोषी माता र लक्ष्मीको पूजाआ राधना गरे घरमा धनका साथै समृद्धि हुने धार्मिक विश्वास गरिन्छ । माता लक्ष्मीको व्रत बसी विधिवत रुपमा पूजा आ राधना गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ । जसले जीवनभर तपाईंको आर्थिक प क्ष बलियो बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।
यो दिन व्रत लिने व्यक्तिले फलाहारका रुपमा च ना र सख्खर प्रयोग गर्नु उत्तम हुनेछ । स्वास्थ्यका हिसावले पनि सातामा एक दिन ब्रत बस्नु निकै राम्रो मानिन्छ । हिन्दु धर्ममा अपनाइने कतिपय कुरा वैज्ञानिक रुपले पनि फाइदाजनक हुने पुष्टि भइसकेका छन् । सन्तोषीमाताको व्रतमा अमिलो खानु ठूलो त्रुटी हुनेछ । साथै यस दिनमा लक्ष्मी माताका अवतार अन्नपूर्णेश्वरी माता र दुर्गा भवानीको पनि पूजा गरिन्छ । यीनीहरुको व्रत विधि भने अलग–अलग हुन्छन् । यो दिन सेतो क पडा लगाउनु पर्छ । शुक्रबार घरमा खीर बनाएर गरिबलाई बाँड्नाले घरको भण्डार भरिने विश्वास छ ।
शुक्रबारको दिन शुक्र ग्रहको पूजा गरे प्रेम र धन प्राप्त हुन्छ । ग्रहहरुमा सबैभन्दा चम्किलो ग्रह शुक्र हो । शुक्र ग्रहलाई प्रेमको प्रतीक मानिन्छ । जसको जन्म कुन्डलीमा शुक्र आफ्नो दशाको कारण अशुभ फल दिइरहेको छ । र यसको प्रभावले विभिन्न रोगको सामना गर्नु परिरहेको छ भने शुक्रलाई खुशी बनाए बिग्रिएको ग्रह सु द्दिकरण गर्नुपर्छ । शुक्रले मुख्यरुपमा हाम्रो जीवनको सुखसँग सम्बन्ध राख्दछ । वैभव, ऐश्वर्य, सम्पदा र प्रसिद्धि शुक्र ग्रहको पूजा गर्नाले प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ ।
Prevसंक्रमित छोरालाई हेरीरहेकी आमाको तस्बिरले संसारलाई नै बनायो भावुक !
Nextबधाई ! नेपालद्वारा चाइनिज ताइपेइ २-० गोल अन्तरले पराजित ।
अरुको दुखमा मल्हम लगाउनेमाथी नै सरकारको दमन, पल शाहले गरे रिहाईको माग